Mashruuca Kala-baxa ee Fuller Street Beach, Daraasadda Kiiska Soo-Celinta Xeebta (Beach Restoration Case Study)
Fuller Street Beach, Eel Pond Reap Faa'iidooyinka Kala Sooca
Iyada oo xilli qaboobku ka jiray Edgartown dhammaadkiisa, Fuller Street Beach waxay heshay dib-u-cusboonaysiin cusub, oo kuleyliyayaashu waxay sugi karaan inay uga sii gudbaan Eel Pond guga.
Ciid cusub oo ka jajaban Eel Pond ee Edgartown waxay ka caawineysaa buuxinta xeebta Fuller -Mark Lovewell
Galab dhalaalaya toddobaadkan, tiro fara badan oo badduur ah iyo socod mararka qaar socdey ayaa ku raaxeysanayay xeebta, halkaas oo tuubad ballaaran oo dhererkeedu yahay ku dhawaad ​​3,500 cagaha ay ka soo qaaday balliga, oo ku dhammaaneysa meel woqooyi ka xigta laydhka Edgartown. Dabayl waqooyiga oo isdaba joog ah ayaa xoogaa muusig ah ku ruxday bacaadka tuubbada iyo hummaagga qalabka korantada hore.
Edgartown waa magaalada kaliya ee leh jaranjarada buuxa ee barnaamijka qulqulaya. - Mark Lovewell
Seagulls waxay ku soo wada ururiyeen kanaal yar halkaas oo tuubadu ku dhammaatay, maadaama Mark DeFeo gadaal iyo gadaal u riixey qeybta hore ee xamuulka ciidda una sii fidiyey laydhka.
Mashruucu wuxuu ka faa'iideysan doonaa daraasiin kuwa milkiilayaasha gaarka ah leh, oo ay la socdaan dad badan oo ku raaxeysta xeebta dadweynaha sannadka oo dhan. Jimcaha soo socda ayaa calaamad u ah imaanshaha jiilaalka ee barkadda iyo maalinta u dambaysa qallajinta.
Gudida edbin ee Edgartown - oo ah kooxda kaliya ee nooceeda ah Jasiiradda - ayaa go’aamisa halka ay ku duugaan sannad walba. Wadahadal ay la yeesheen Gazette toddobaadkan, xubinta guddiga Dudley Levick waxay ku qiyaastay in ku dhawaad ​​4,000 yar oo dhudhun ah laga saari doono balliga isbuuca soo socda. Wadarta lacagta waxaa lagu xaqiijin doonaa sahan guga.
Ciid badan ayaa kusii socday xeebtaas oo waxay qaadday ciidda dhamaanteed wadada Fuller Street Beach, ayuu yiri madaxa dekada Edgartown Charlie Blair, oo lataliye u ah guddiga. Dhaqdhaqaaqa ciidda xeebta dhexdeeda waxay cabsi xoog leh ka abuurtay Eel Pond waxayna bilaabatay inay xirto dekeda koonfur bari ee laydhka.
Barnaamijka qulqulaya ee magaalada ayaa ka bilaabmay 1980s markii guddigu go’aamiyay in qiimaha dayactirka joogtada ahi ay sabab u tahay in magaaladu leedahay degmo u gaar ah. Codbixiyeyaashu way oggolaadeen, markii dambe oggolaadeen iibsashada $ 400,000. Gudiga dredge wuxuu leeyahay miisaaniyad sanadeed howleedkiisa oo qiyaastii ah $ 132,000.
Sawirro laga soo qaaday 1980s ayaa muujinaya jaranjarooyinka wadada xeebta ee Fuller, oo hadda u dhimatay badda dhexdeeda awgeed. - Mark Lovewell
Edgartown sidoo kale waxay ahayd magaaladii ugu horraysay ee Jasiiradda dhexdeeda oo hesha ruqsad baahsan, taas oo hadda daboolaysa xarumaha 17 ee loo calaamadeeyay dayactirka.
Eel Pond waxaa la soo daayay dhowr sano ka hor, laakiin miyir-beelku si tartiib-tartiib ah ayey dib ugu soo noqotay. Qaddar aad u fara badan ayaa mar kale laga saaray sanadkii hore, laakiin jiilaal daran ayaa dib uga noqday inta badan horumarkaas. Sannadkan, magaaladu waxay billowday isu-diyaarin hore, laakiin shaqadu ma bilaaban karto illaa bartamihii Noofembar inay u hoggaansanto tilmaamaha gobolka.
Cimilada khafiifka ah ee sanadkan ayaa u oggolaatay horumar deg deg ah goobta.
Blair wuxuu yiri: “Badanaa maalmo badan ayaan luminnaa qalab la qaboojiyey oo aad magacowday,” ayuu yiri Mudane Blair. Wax walba oo qalad khaldami kara si qaldan ayey u dhacaan xilliga jiilaalka.
Mashruucu wali may gaarin ujeedkiisa, laakiin wuu soo dhowaan doonaa. Waxaan si sax ah ugu soconnaa dhamaadka, ”ayuu yidhi Mr. Levick. Waxa ka hadha waxa la sameeyo kuma filna in lagu muteysto hoos u dhaca soo socda sanadka soo socda. ”Shaqaaluhu waxay u badan tahay inay sii wataan qaabaynta xeebta cusub ka dib waqtiga kama dambaysta ah ee ka shaqeynta barkadda.
Dhanka kale, guddiga dredge ayaa ka faalloodaya mashruucyada ay ku sii socon doonaan sannadka soo socda. Paul Bagnall oo ka shaqeeya kalluunka qolofka laga helo ee Edgartown, oo talobixiya guddiga, ayaa rajeeyay inuu u weecin doono dhinaca Cape Pogue ee ku taal Chappaquiddick, halkaas oo kordhinta wareegga faa iidada u leh cudurka iyo kalluunka qolofta leh.
Biyo-goynta Eel Pond, nafaqada nafaqada ee xeebta Fuller Street.
Edgartown waxay $ 62,250 sanadkii hore ka heshay xafiiska Maareynta Aaga Xeebta ee loogu talagalay dib u soo celinta baaxadda weyn ee Fuller Street Beach, Lighthouse Beach iyo Lighthouse Pond, laakiin mashruuca hadda socda waxaa gebi ahaanba daboolay maalgelinta magaalada.
Qayb yar ayaa ka shaqaysay toddobaadkan magaalada Edgartown Great Pond, iyada oo nadiifinaysa ciid si loo fududeeyo jebinta sannadlaha ah ee qulqusha barkadda isla markaana kordhisa sharafta kalluumeysiga. Laba sano ka hor, magaalada iyo Xarunta weyn ee Pond Foundation waxay isu diyaariyeen inay ka saaraan shooga ay sababtay Hurricane Sandy ee 2012.
2009 iyo mar kale ee 2014, magaalada waxay ka saartay ciid badan oo ciid ah balliga Sengekontacket, hagaajinta wareegga, oo alaabta ka iibisay milkiileyaasha guryaha gaarka loo leeyahay si loogu quudiyo xeebta aagga. Laakiin qulqulaya badanaa waa in lagu noqdaa iyadoo xeebaha xeebta ay marayaan nabaad-guur iyo kala-bax.
Bagnall ayaa yidhi "Runtii shaqo fiican ayaanu ka qabanay Sengie, laakiin nasiibdarro waxyaabo ayaa buuxin doona, xeebaha ayaa kasii dari doona," ayuu yidhi Bagnall. "Waxay u badan tahay inay laba sano maqnaayeen, laakiin la yaab iguma noqonaynin inaan mar labaad ku arko qulqulaya halkaas."
Dillac kale ayaa ah nadiifinta meelaha baabuurta la dhigto ee ku ag yaal barxadda hore ee Harbor View, oo dhinaca galbeed ka xigta laydhka. Mr. Blair wuxuu sheegay in kaliya dhawr boqol oo mitir cubic laga saari doono goobta.
Xilliga qulqulka magaalada wuxuu dhammaanayaa Jan. 15.